बिवाहपछि किन महिलाको हिप बढ्छ ? यस्तो रोचक छ कारण ! – Hamrosandesh.com
उनीहरुको शरीर एकदमै मोटाउने तथा हिप एकदमै बढ्छ । आखिर बिहेपछि किन यस्तो हुन्छ त रु उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? एक सर्वेले के कुराले महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ ? यसको खोजी गरेको छ ।युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार महिलाको हिपमा आउने परिवर्तनको कारण खोजिएको छ । यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौ न सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा ठुलो थियो ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलार्इ गर्भवती हुँदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो । बिहेपछि महिलाहरु धेरै मोटाउनुको कारण पनि पत्ता लागेको छ । विभिन्न अध्यययनले विवाहपछि महिलाहरु मोटाउनुको कारण पत्ता लागेको हने । बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ ।थपिएको जिम्वेबारी बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ । बिहे पछि परिवर्तन हुने जिवनशैली तथा चाहानाका कारण महिलाहरूको शरिरमा हर्मोन तिब्र रुपमा परिवर्तन गराउँछ,जुन तौल बढाउन जिम्मेवार छ ।